sidee ayaan oogu dari karaa mawduuc ama maqaal ama wax faaido leh??
Subject: sidee ayaan oogu dari karaa mawduuc ama maqaal ama wax faaido leh?? Sun Feb 14, 2010 3:09 am
sidee ayaan oogu diri karaa mawduuc ama maqaal ama wax faaido leh??
suaashaas waa mid fudud jawaabteed sxb meeshaa rabtid oo aad doonaysid inaa wax ku darto aa kilik siinee kadib taabo QOR MADUUC warqada kuu soo baxdo aa waxaa rabtid ku qoree oo aad doonaysid kadib walaal waxaa dhehee SEND kadib warqadaa sidaas ayay qaybtaas ku galee.
waaa walaalkiin BIN MAADOW oo qayr idin rajaynaaya
Subject: Re: sidee ayaan oogu dari karaa mawduuc ama maqaal ama wax faaido leh?? Fri Feb 19, 2010 6:30 pm